တစ်ဦး HARD DRIVE ကို FORMAT လုပ် - HARD DISK ကို - 2019
အဘယ်အရာ disk ကို format လုပ်နှင့်မည်သို့ထိုသို့ပြုမှဖြစ်ပါတယ်
ခေတ်သစ်သံတမန်တို့ကိုကကမ်းလှမ်းဆက်သွယ်ရေး၏စက်ဝိုင်းနီးပါးန့်အသတ်ချဲ့ထွင်ခြင်းအဘို့အခွင့်အလမ်းများကို, အွန်လိုင်းမဆိုကွန်ယက်ကိုအသုံးပြုသူ၏အကျိုးကျေးဇူးများဒါပေမယ့်လည်းအမျိုးမျိုးသောအင်တာနက်ကန်ဆောင်မှုအခြားသင်တန်းသားများအနေဖြင့်မလိုလားအပ်သောနှင့်တစ်ခါတစ်ရံနှောင့်အယှက်မက်ဆေ့ခ်ျ၏ပုံစံအချို့ဒုက္ခမသာဖြစ်ခြင်း၏ယခုအချိန်တွင်မှဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်။ ကံကောင်းထောက်မစွာ, ထို option ကို "အနက်ရောင်စာရင်း" ကွန်ယက်မှတဆင့်သတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်သည်ခေတ်သစ်နည်းလမ်းများတပ်ဆင်ထားသည်။ ဤဆောင်းပါးသည်ပိတ်ဆို့များ၏စာရင်းထဲတွင်လူ့သို့မဟုတ် bot ဆောင်ကြဉ်းဒါသူ့ကို messenger ကို Viber ကိုအတွက်မဆိုမက်ဆေ့ခ်ျများလာပြီရပ်တန့်ဖို့ဘယ်လောက်မှာကြည့်ရှုမည်။
အဆိုပါ client ကိုလျှောက်လွှာ Vaybera ကြောင့်အမျိုးမျိုးသောမိုဘိုင်းနှင့် desktop ပေါ်မှာ operating system ကိုတစ်ဦးပတ်ဝန်းကျင်တွင်လည်ပတ်နိုင်ပါတယ်ဆိုလိုသည်မှာ cross-platform ကိုဖြေရှင်းချက်ဖြစ်တယ်, ဒါငါတို့သည်သင်တို့ပူဇော်ပစ္စည်းက Android, iOS နဲ့ Windows အတွက်တမန်အတွက်တင်ပါတယ်၏ပိတ်ဆို့ခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့, ထိန်းသိမ်းရေးဖော်ပြသုံးခုအဓိကကဏ္ဍများကိုခွဲခြားသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ကွဲပြားခြားနားသောပလက်ဖောင်းများပေါ်တွင် Viber ကို messenger ကိုထည့်သွင်းခြင်း
ထိုတမန်အတွက်တစ်စုံတစ်ရာအရေးယူထွက်တင်ဆောင်ခြင်းမပြုမီ, သငျသညျကိုသူတို့မဆိုအကျိုးသက်ရောက်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်, နားလည်ရပေမည်။ အကျိုးဆက်များမသက်ဆိုင်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ဖို့အသုံးပြုဆော့ဖ်ဝဲပလက်ဖောင်း၏အောက်တွင်တင်ဆက်ရန်ညွှန်ကြားချက် execute:
သင်ကတခြားပါတီသည် "အနက်ရောင်စာရင်း" ၌တစ်ဦးဝန်ဆောင်မှုပေးပို့ပြီးနောက်သူ Viber ကိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုမှတဆင့်မည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့နိုင်စွမ်းဆုံးရှုံးသွားနှင့်အသုံးပြုသူကသော့ခတ်ပါလိမ့်မယ်။ ပိုများသောအတိအကျ, မက်ဆေ့ခ်ျကိုလွှဲပြောင်းဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မည်, ဒါပေမဲ့သူတို့တမန်ပိတ်ဆို့ပါဝင်သူ status ကိုထဲတွင်ရှိနေပါဦးမည် "Sent, ကယ်နှုတ်မရ"နဲ့ audio နဲ့ video call, ကပဲဖြေဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။
အဖွဲ့ဝင်ဝန်ဆောင်မှုကို "အနက်ရောင်စာရင်း" ကနေအသုံးပြုသူမှသတင်းအချက်အလက်ပေးပို့နိုင်ပါလိမ့်နှင့်အသံ / ဗီဒီယိုဖုန်းခေါ်ဆိုမှုပိတ်ဆို့ထားသည် destination သည်အစပျိုးမဟုတ်, ထိုတမန်အတွက် option ကိုသော့ခတ်တင်ပါတယ်ကိုအသုံးပြုပါ။
အဆိုပါပိတ်ဆို့အဆက်အသွယ်, ကောင်းကင်တမန်၏ပါဝင်သူများ၏ကိုယ်ရေးအကျဉ်းကို, ကိုယ်စားပြုပုံနှင့်အဆင့်အတန်းကိုရှုမြင်သည် "အနက်ရောင်စာရင်း" ထဲထည့်သွင်းဖို့အခွင့်အလမ်းဖြစ်လိမ့်မည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, မလိုလားအပ်သောတင်ပါတယ်သော့ခတ်၏လိပ်စာမှပေးပို့နိုင်ပါတယ်ဖြစ်လာမယ့်အုပ်စုတစ်စုကို chat ဖို့ဖိတ်ကြားချက်ကိုလျှောက်ထားခဲ့သည်။
Lock ကို Vayber အဖွဲ့ဝင် ID ကိုကောင်းကင်တမန်၏လိပ်စာစာအုပ်ကနေအဆက်အသွယ်ကဒ်ကိုဖျက်ပစ်မထားဘူး။ ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများနှင့်စာပေးစာယူ၏သမိုင်းအားဖြင့်ဖျက်ဆီးခံရမည်မဟုတ်ပါ! ဒေတာအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှစုဆောင်းလျှင်ဆက်သွယ်ရေးဖယ်ရှားပစ်ရမည်, ကလက်စွဲသန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်ပေသည်။
အဆက်အသွယ် Viber ကိုအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပိတ်ဆို့ခြင်း Reversible လုပ်ဖြစ်ပြီးအကြိမ်ကိုရေတွက်နိုင်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ က "အနက်ရောင်စာရင်း" မှအဆက်အသွယ် delete နှင့်ဆက်သွယ်ရေးသက်တမ်းတိုးရန်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဖြစ်နိုင်သောဖြစ်ပြီး, သော့ဖွင့ဘို့ညွှန်ကြားချက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ website တွင်ပစ္စည်းတှငျတှေ့နိုငျပါသညျ။
Read more: Android, iOS နဲ့ Windows အတွက် Viber ကိုတစ်ဦးအဆက်အသွယ်ပြန်ဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို
မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ခြင်းနှင့် Android များအတွက် Viber ကိုသုံးပြီးအစီရင်ခံတမန်မှတစ်ဆင့်ဖုန်းခေါ်အောင်၏တန်ဖိုးရှိရှိဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်လွယ်ကူသောအခြားပါတီဝန်ဆောင်မှု access ကိုပိတ်ဆို့။ သင်ကစမတ်ဖုန်းသို့မဟုတ် tablet ၏ screen ပေါ်မှာဘုံဘိုင်အနည်းငယ်လုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
Method ကို 1: messenger ကိုဆက်သွယ်ပါ
မည်သို့ပင်ဆက်သွယ်ရရှိနိုင် Vaybera များ၏စာရင်းအပေါ်ထင်ရှားလျက်, ဘယ်လောက်ရှည်လျား intensive အခြားပါတီနှင့်အတူအချက်အလက်များ၏လဲလှယ်ခဲ့မည်သို့ပြုလုပ်သည့်အချိန်တွင်မဆိုသော့ခတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Android အတွက် Viber ကိုမှအဆက်အသွယ်ထပ်ထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
ပွင့်လင်းသောကောင်းကင်တမန်များနှင့်အဆက်အသွယ်များ, Android အတွက်မျက်နှာပြင် Viber ကိုထိပ်မှာ eponymous tab ကိုအပေါ် tapnuv များ၏စာရင်းသွားပါ။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. (သို့မဟုတ်ကိုယ်ပွား) Locate နှင့်မလိုလားအပ်သောတင်ပါတယ် tapnite ပလ္လင်ဖြစ်လာ။
အထက်ပါအဆင့်ပါဝင်သူ Vaybera အကြောင်းကိုအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေနဲ့မျက်နှာပြင်ကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီနေရာတွင်အတွက် options menu ကိုခေါ်ပါဖို့လိုတယ် - မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းညာဖက်မှာသုံးမှတ်များ၏ရုပ်ပုံများကိုထိပုတ်ပါ။ ထိုအခါကိုကလစ်နှိပ်ပါ "Block ကို"။ ပြီးစီးသည့်အမည်ပျက်စာရင်းဖို့အဆက်အသွယ်ရွေ့လျားဘို့ဤလုပ်ထုံးလုပ်နည်းတွင် - မျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်ခေတ္တသတိပေးချက်တစ်ခုပြသပေးပါတယ်။
Method ကို 2: ချက်တင်မျက်နှာပြင်
လူများကဤဝန်ဆောင်မှုကိုမှတ်ပုံတင်နှစ်ခုအကြားသတင်းအချက်အလက်ဖလှယ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခဲ့သောကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားကနေအဆက်အသွယ်များ၏စာရင်းများကို၌သူတို့ကိုရှာတွေ့ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ မည်သည့်အကောင့်နှင့်အတူ instant messenger မက်ဆေ့ခ်ျကိုအပ်နိုင်ပါတယ်, နှင့်ပေးပို့သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာထုတ်ပြန်အသိပေးခြင်းမရှိဘဲ Viber ကိုမှတဆင့်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများစတင် (သာဆဲလ် ID ကိုပျက်ကွက်ခြင်းမရှိဘဲလက်ခံသူမှကူးစက်သည်, အသုံးပြုသူနာမ၌ logging နှင့် client ကိုလျှောက်လွှာ configuring အခါ, သငျသညျကိုသတ်မှတ်လို့မရပါဘူး) ။ (ရာကနေအလိုအလျှောက်ဖြန့်ဖြူး Spam တွေကိုနှင့်အကောင့်အပါအဝင်) ထိုသို့သောတစ်ဦးချင်းစီကိုလည်းသော့ခတ်ထားနိုင်ပါတယ်။
အဘယ်သူ၏ဝိသေသလက္ခဏာက "အနက်ရောင်စာရင်း" တွင်ထားရှိရပါမည်သူတစ်ဦးဦးနှင့်အတူပွင့်လင်းချက်တင်။
စကားဝိုင်းမှာသေးကောက်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေနှင့်မက်ဆေ့ခ်ျကို (s) ကိုမဟုတ်ခဲ့ (နှင့်) Viewed အကယ်. (s) ကိုပေးပို့သူအကြောင်းကြားပါလိမ့်မည်အဆက်အသွယ်စာရင်းတွင်မပေးပါ။ ဒါဟာ options နှစ်ခုကမ်းလှမ်း:
ချက်ချင်း "အနက်ရောင်စာရင်း" အတွက်အမှတ်အသားပေးပို့ - tapnite "Block ကို";
သတင်းအချက်အလက်မျှဝေဖို့မလိုအပ် / အလိုဆန္ဒသေချာစေရန်, ထိုမက်ဆေ့ခ်ျသို့ရွှေ့ရန် - ကိုထိပုတ်ပါ "Show ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကို"ထိုအခါ tapom လက်ဝါးကပ်တိုင်ရွေးချယ်စရာများ၏စာရင်း၏ထိပ်ဆုံးကနေစာပေးစာယူ၏ထပ်ဒေသပိတ်ပါ။ နောက်ထပ်ပေးပို့သူပိတ်ဆို့ဖို့, ဒီလမ်းညွှန်၏နောက်ခြေလှမ်းသွားပါ။
ကိုထိပုတ်ပါတစ်ခုချင်းစီကိုသူ့ထံမှမက်ဆေ့ခ်ျလက်ခံရရှိအနီးတွင်တည်ရှိသောအခြားပါတီ avatars ။ ပေးပို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်နှင့်အတူမျက်နှာပြင်တွင်မျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာသုံးစက်နှိပ်ခြင်းဖြင့်တစ်ခုတည်းအချက်ပါဝင်သည်ဟု, မီနူးကိုခေါ်ပါ။
စာနယ်ဇင်းများ "Block ကို"။ အဆိုပါအမှတ်အသားကိုချက်ချင်း "အနက်ရောင်စာရင်း" ၌နေရာချပါလိမ့်မည်နှင့်သင့် client ကို applications များတမန်ထဲမှာမှသတင်းအချက်အလက်လွှဲပြောင်းရန်စွမ်းရည်ရပ်စဲလိမ့်မည်။
သငျသညျကို iOS ဝန်ဆောင်မှုကို manual များအတွက် Viber ကို app ကိုဝင်ရောက်ဖို့အသုံးပြုနေသည်ဆိုပါကအခြားအဖွဲ့ဝင်များ messenger ကိုသော့ခတ်၎င်း၏အကောင်အထည်ဖော်မှု၏ရလဒ်အဖြစ်ယူဆအလွန်ရိုးရှင်းပါသည် - သင်က iPhone / iPad ကို screen ပေါ်မှာအနည်းငယ်ထိအကောင်အထည်ဖော်ရန်နှင့်မလိုလားအပ်သောတင်ပါတယ်ဖြစ်လာဖို့လိုအပ်သည် "အနက်ရောင်စာရင်း" ကိုသွားပါလိမ့်မယ်။ စစ်ဆင်ရေးနှစ်ခုနည်းလမ်းများတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ရရှိနိုင်ပါ။
အသုံးပြုသူ Viber ကိုပိတ်ဆို့နှင့်ပါဝင်သူ data တွေကို iOS အတွက်တမန်ကို client application ကိုကနေလက်လှမ်း, အဆက်အသွယ်စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီးလျှင် apply တမန်ကနေတဆင့်သတင်းအချက်အလက်များပေးပို့ဖို့ထိုကဲ့သို့သောလမ်းများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေများသူ့ကိုမဆုံးရှုံးဖို့ခွင့်ပြုထားတဲ့ပထမဦးဆုံးနည်းလမ်း။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: iOS အတွက် Viber ကိုမှအဆက်အသွယ်ထပ်ထည့်ဖို့ကိုဘယ်လို
iPhone အတွက် Viber ကိုစတင်ရန်နှင့်သွားပါ "ဆက်သွယ်ရန်"ယင်းမျက်နှာပြင်၏အောက်ခြေတွင်မီနူးထဲမှာသက်ဆိုင်ရာ icon ပေါ်မှာ Tapnuv ။
အဆက်အသွယ်များ၏စာရင်းမှာတော့လက်မခံနိုင်နှင့်မလိုအပ်သောခဲ့သည့်နှင့်အတူအဆိုပါပါဝင်သူသို့မဟုတ်ကိုယ်စားပြုပုံတမန်၏အမည်, ဆက်သွယ်ရေးထိပုတ်ပါ။ ညာဘက်ထိပ်မှာခဲတံအိုင်ကွန်ပေါ်တင်ပါတယ် tapnite အကြောင်းအသေးစိတ်နှင့်အတူပေါ်လာသော screen ပေါ်မှာ။ ထို့နောက် function ကိုအမည်ပေါ်တွင်ကလစ်နှိပ်ပါ "Block ကိုအဆက်အသွယ်" မျက်နှာပြင်ရဲ့အောက်ဆုံး။
အတည်ပြု, သော့ခတ်နှိပ်ဖို့ "Save"။ ရလဒ်အဖြစ်အဖော်အမှတ်အသားရေတိုအချိန်အသိပေးစာ၏ထိပ်ပေါ်မှာတဲ့ pop-up ကအတည်ပြုသောက "အနက်ရောင်စာရင်း", ထဲတွင်နေရာဖြစ်ပါတယ်။
မလိုလားအပ်သောပါပြီသူတင်ပါတယ်အဖြစ် (မအဆက်အသွယ်စာရင်းထဲက) ကိုအမည်မသိလူတစ်ဦး, မက်ဆေ့ခ်ျပေးပို့ မှစ. , သင်က iPhone များအတွက်စကားပြောဆိုမှုမျက်နှာပြင် Viber ကိုကနေညာဘက်ကိုဖယ်ရှားပစ်ရနိုငျသညျ။
အဆိုပါဖွင့်ပါ "ချတ်များ" iPhone အတွက် Vaybere နှင့် lockable စပီကာနှင့်အတူ tapnite ခေါင်းစဉ်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးရေး။
ဒီလူစိမ်းကစေလွှတ်သတင်းအချက်အလက်များနှင့်အတူပထမဦးဆုံး "အသိအကျွမ်း" ဖြစ်ပြီး, ချက်တင်ယျတျောနှငျ့အတူသယ်ဆောင်မထားလျှင်, သင် messenger ကိုကနေရရှိနိုင်တဲ့စာရင်းထဲတွင်တစ်ဦးအဆက်အသွယ်များမရှိခြင်းသတိထားမိပါလိမ့်မယ်။ သငျသညျကိုချက်ချင်းစုံစမ်းမှု window တွင်အမည်တူ link ကို tapnuv, ပေးပို့သူပိတ်ဆို့နိုင်ပါတယ်။
ထိတွေ့ - ဒါဟာကစေလွှတ်အချက်အလက်တွေအားလုံးကိုနှင့်အတူခင်မင်သိကျွမ်းရလည်းဖြစ်နိုင် "Show ကိုမက်ဆေ့ခ်ျကို"။ အနာဂတျမှာပိတ်ဆို့ပေးပို့သူအပေါ်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်တော်မူပြီးမှ, ဒီ manual ၏အောက်ပါစာပိုဒ်ကိုသုံးပါ။
ထိုတမန်ကိုယ်စားပြုပုံထဲမှာမလိုချင်တဲ့အဖော်နှင့်အတူချက်တင်မျက်နှာပြင်တွင်လက်ခံရရှိမည်သည့်မက်ဆေ့ခ်ျကိုအနားမှာ image ကိုအသာပုတ်ပါ - ကပေးပို့သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းအချက်အလက်များ၏ရှာဖွေတွေ့ရှိဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြပါလိမ့်မယ်။ ပစ္စည်း၏အောက်ခြေတွင်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်ပါသည် "Block ကိုအဆက်အသွယ်" - ဤ link ကို click လုပ်ပါ။
အထက်ပါအဆင့်များ Vaybere သစ်ကိုကို item ရှိ "အနက်ရောင်စာရင်း" ၏ချက်ချင်း replenishment ဖြစ်ပေါ်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ PC အတွက် Viber ကို app ကိုမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့မိုဘိုင်း device ကို install လုပ် client ကိုတစ်ဦး "မှန်" ဖြစ်ပြီး, ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ operated မရနိုင်ကတည်းက၎င်း၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုအများအပြားအရိုအသေအတွက်ကန့်သတ်ထားသည်။ ဤသည်ကိုပိတ်ဆို့ထားအကောင့်တစ်ခုစာရင်း၏ဝန်ဆောင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲရှိအခြားသင်တန်းသားများ၏ "အမည်ပျက်စာရင်း" ကို access ကိုများအတွက်အခွင့်အလမ်းများကိုသက်ဆိုင် - ကောင်းကင်တမန်၏ Windows ကို-ဗားရှင်း, သူတို့ကရိုးရှင်းစွာရရှိနိုင်မရှိကြပေ။
ထို့ကြောင့်, မက်ဆေ့ခ်ျနှင့်တိကျသောအမှတ်အသားအနေဖြင့်ခေါ်ဆိုသငျသညျ android- သို့မဟုတ် iOS ကို-ဗားရှင်း Vayber လျှောက်လွှာမှတဆင့်အထက်ပါဆောင်းပါးအတွက်အကြံပြုချက်များနှင့်ပိတ်ပင်တားဆီးမှုမလိုချင်တဲ့အဖော်ကိုအသုံးပြုသင့်ပါတယ်, သင့်ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်တမန်သို့မလာကြဘူး။ ထို့ပြင်အဆိုပါအမှု၌က "အနက်ရောင်စာရင်း" ကနေထပ်တူနှင့်အသုံးပြုသူစမတ်ဖုန်း / တက်ဘလက်, ဒါပေမယ့်လည်း desktop ပေါ်က / Laptop ကိုမသင်သာသတင်းအချက်အလက်များပေးပို့နိုင်ပါလိမ့်မည်မဟုတ်ဝင်သော။
ကျနော်တို့ကတခြားပါတီများ Viber ကို messenger ကိုဝန်ဆောင်မှုကနေတစ်ဆင့်ကိုစလှေတျမလိုချင်တဲ့သတင်းအချက်အလက်ဆန့်ကျင်သူတို့ကိုယ်သူတို့ကာကွယ်ပေးရန်တွေ့နိုင်ပါသည်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပေမယ့်လည်းအလွန်ရိုးရှင်းတဲ့သာဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါသာကန့်သတ် - မိုဘိုင်း OS ကိုပတ်ဝန်းကျင်အတွက် operating သီးသန့်အသုံးပြုခဲ့ client ကို applications များပိတ်ဆို့ခြင်းသည်။